Xalayaa Obboo Lammaa Magarissaa Afiyyaa'ii Caffee Oromiafi - Caboowanci.com-Oromia
Xalayaa Obboo Lammaa Magarissaa Afiyyaa’ii Caffee Oromiafi
December 1, 2015 December 1, 2015 Nadhani	49 Comments OLF, OMN, Oromia
By Jawar Mahammed:Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa, Af-yaa'ii Caffee Oromiyaatiif Finfinnee.Haasaya isin uummata Burraayyuu waliin gootan dhaggeeffannee jirra. Hunda dura nama akka keessan onneerraa dubbatee garaa saba isaa jiisu mooraa gamasii keessatti arguunuu waan guddaadha, ammas ija hamaa sirraa ha qabu jenna. Itti aansuun dhimmoota lama isin kaaftanirratti yaada kennuun barbaada.Dhimma Maastar Pilaanii Finfinnee ilaalchise 'ummanni Oromoo yoo hin barbaanne hojirra hin oolu' jettan. Bar wanni 'yoo' jedhan hin jiru. Ummanni ifaan ifatti akka mormu irra deddeebi'ee ibseera. Waggoota lama dura ilmaan Oromoo 78 lubbuu isaanitiin, dhibbatamni dhiiga isaaniitiin, kumaatamni ammoo walabummaa isaa mana hidhaatti dhabuun mamii tokko malee mormuun ejjannoo isaanii isiniif ibsanii jiran. Dabalataanis hayyoonni Oromoo addunyaa guutuurraa miidhaa Maastar Pilaanii kanaa qorannoo bifa hedduutiin mirkaneessanii jiran. Akkasumas miseensonni keessanuu waltajjii garaagaraa irratti ifatti Maastar Pilaanii kana mormanii jiran. Kanaafuu 'yoo' wanni jedhamu wanti hafe hin jiru. Isiniif Caffeen Oromiyaa isin hooggantan dhuguma yoo uummataaf dhaabbate ifatti as bahee Maastar Pilaanii kana dhaabaa!
Dhimma labsii magaalota Oromiyaa ilaalchisee 'dogoggorri yoo jiraate nutu seera baase, jijjiiruufis aangoo guutuu qabna' jettanii jirtan. Rakkoo labsichi qabu bifa armaan gadiitti tarreessuun akka jijjiirtan isin gaafanna.
1)Labsiin kun mirga addaa jiraattota magaalaatiif kennuun dantaa sabni Oromoo magaalota Oromiyaa irraa gara fuulduraatti argachuu malu dhorkuun, kan seenaadhaan hir’atee jiru daran akka hammaatu godha. Akkuma beekamu dhiibbaa sirnoota durii irraan kan ka’e uummata magaalota gurguddoofi giddu-gala ta’an keessa Oromoon lakkoofsaan xiqqaadha. Afaaniifi aadaan Oromoos dhiibbaa walfakkaatu jala gala jechuudha. Labsiin fooyya’ee bahe kun immoo imaaammanni misooma magaalaa cufti fedhiifi dantaa jiraattota magaalaatin ta’a jedha. Kana jechuun labsiin kun magaalonni Oromiyaa imaammata Oromoo osoo hin taane harka caalu qubattoota bakka biroo dhufan akka fayyadutti kaayame. Kun ammoo imaammanni farra Oromoo ta’e yeroo wayii akka baafamuufi Oromoon akkuma dur daran magaalarraa akka dhiibamu (push factor) karaa bana. Magaalonni Oromiyaa keessa jiran dantaa hawaasummaafi diinagdee Oromoo eegsisuun guddachuu qabu. Kanaaf ammoo mirgi addaa jiraattota magaalaatiif labsii kanaan kenname fuulduree Oromoof balaa guddaadha hanga Oromoon magaalota Oromiyaa keessatti gama hundaan caalmaan argamutti. Magaalonni akka qaama
Oromiyaatti Oromiyaa waliin guddachuu qabu. Kanaaf akkuma amma duraa bulchiinsi magaalaa bulchiinsa godinaa jala galee imaammanni misooma magaala kan gandoota baadiyyaa naannoo sanittin walitti hidhatee deemuu qaba. Kana jechuun imaammata magaala irratti kan murteessuu qabu jiraattota magaalaa qofa osoo hin taane jiraattota godina magaalaan sun keessa jirtuu cufa ta’uu qaba. Imaammanni mootummaa yeroo dheeraaf qabamuu qabu, Oromoo deebisanii magaalota Oromiyaa keessatti ijaaruu ta’uu qaba.
2)Isin akka jettanitti magaalonni walitti makaman kanneen Oromiyaa keessaa qofa. Kun garuu labsii kanarratti ifaa miti. Magaalota ollaa jedha malee kan Oromiyaa jedhee ifatti lafa hin kaayu. Fakkeenyaaf Shaashamanneefi Hawaasaan, Awwadaayifi Harar ‘fedhii jiraattota isaaniitin’ walitti makamna yoo jedhan, labsiin kun ni aanjessa malee hin ugguru. Keessattuu magaalonni daangaa irra jiran balaa hamaa jala galu. Dabalataanis yaannummaan magaalan lama yoo babal’ate walitti makamuu qaba jedhu kun falaasama jallaa misoomaa magaalaatin wal hin qabanneedha. Magaalaan lama babal’atanii yoo walitti seenanis, bulchiinsi isaanii tokkotti deebi’uu barbaachisummaa hin qabu. Biyyoota hedduu keessatti magaalonni waliin ollaa baay’een guddatanii walkeessa waan seenaniif daangaa uumamaatuu hin qaban; garuu daangaa bulchiinsaa (administrative boundary) fi bulchiinsa mataa isaanii qabatanii turu.
3)Maqaa magaalotaa jijjiiruu ilaalchisee, dhugaadha sirnoonni durii magaalotaaf maqaa alagaa kennan. Galanni qabsoo Oromootiif haa ta’u magaalonni sun amma maqaa Oromootti deebi’anii jiru. Magaalan hanga ammaa maqaa alagaa baattee jirtu Finfinnee qofa. Maarree yaadni maqaa magaalaalee jijjiiruu kun labsii kana keessatti haammatamuu maaltu barbaachise? Maqaan magaalaa seenaadha.
4)Caaseffamni magaalaalee labsii fooyya’e kana keessatti kaayames rakkoo qaba. Magaalota sadarkaa regiopolis kennameef aangoo godinaa jalaa baasuun shira wayii akka qabu shakkaa turre. Shakkiin keenya sun amma mirkanaa’ee jira. Ibsii kaleessa Mootummaan Federaalaa baase qaamni haaran “Federal Land Development Corporation” jedhamu dhaabbatuuf akka deemuufi hojiin qaama kanaatis magaalota sadarkaa metropolis fi regiopolis qaban keessatti karoora misooma lafa magaalaa raawwachiisuu akka ta’e ifa godhee jira. Kana jechuun lafaafi imaammanni magaalota Oromiyaa sadarkaa regiopolis kennameef suduudaan qaama Mootummaa Federalaa kanaan buluuf deema jechuudha. Labsimmaan Caffeen baaseyyuu karoora “Federal Land Development Corporation” kana dhaabanii magaalota Oromiyaa of jalatti galchuuf qabaniif karaa
banuuf ta’u amma shakkiin hin jiru. Kun ammoo heera mootummaa Itoophiyaatifi kan Oromiyaatis unkuteessani, federaalizimii diiganii akka duritti sirna jiddu-galeessaa (centralized form of government) dhaabuun adda hin ta’u. Mootummaan Naannoo Oromiyaa kan isin hooggantan lafa magaalaa keessaa geggeeffamaa jira; Oromoofi Oromummaafis balaa guddaadha.
Kanaafuu yoo dhuguma akka jettan gorsa namaa dhagahuu qabdu yoo ta’e, dogoggora labsii fooyya’e kanaa sirreessuuf aangoo qabaattan, labsiin kun mirgaafi dantaa Oromoofi Oromiyaa dabarsee waan laatuuf akka fooyyessitan isin gaafanna. Akkaataa itti fooya’uu qaburratti gorsaafi tumsa ogeeyyota seenaa, seeraafi teeknikaa yoo barbaaddan, ilmaan Oromoo dhibbaatama biyya keessaafi alaa akka isiniif dirmatan shakkii hin qabaatiinaa!
Ulfina Wajjiin Obboleessa kee Jawar Mohammed [Mallattoo]
Kab. Muktaar Kadiir Pirazidantii Oromiyaatiif
Kab. Abbaa Duulaa Gammaa,Afa-Yaa’ii Manamarii Itoophiyaatiif
Dhaabbata Dimokraasummaa Ummata Oromootif
Moottumaan TPLF Gaaziidhaa Barattoota Fixaa Jira. →
49 thoughts on “Xalayaa Obboo Lammaa Magarissaa Afiyyaa’ii Caffee Oromiafi”
December 1, 2015 at 20:10
This is what the largest oromo peoples need and what they will struggle to achieve. Your Comment
Galatoomi, kab. Obbo Lammaa Magarsaa akka si dhagayan shakkii hin qabnu.
Nuuf jiraadhu goota keenya.ijji hamtuun si hin argin!
Umrii dheera siif haakennu obboo jawar mam. Gaafiin kee gaafii oromoota maratii galatoomi ! Yaada gaariidha! Hogatoonni caffee oromiyaatis akka ofiiti fudhatanii Yaada itti kenaan waaqayyoo karra isanii banaa haagodhu! !
Horaa bulaa akkasumatti itti nuf fufa.
jamal husen tilmoo
Nuti haqa keenna barbaanne malee haqa namaa hin gaafanne
December 2, 2015 at 02:51
xalayaan isin mootummaa oromiyaatiif barreessitan waanuma oromoo cufa keessa jiruu waan ta’eef afaan kiyyaan waaj dubbattan natti fakkaate akkuma waraabessi warra kaabaa abbaay tsahaay jaalattanus;jibbitanus master pilaaniin kuj galma ni gaha jedhu nutis jaalatanus jibbanus oromiyaan lama hin taatu hamma ilmi oromoo oromiyaarraa dhumee nama tokko qofa ta’utti rasaasni guddaan keenya tokkummaa ummata keenyaatii Jawaar Muhaammad leenca oromoo horii bulii!!!
nuuf jiraadhaa yaada kana hubattanii akka foyyeesitan abdi qabna
December 2, 2015 at 05:01
Kab Jawaar Muhammad Hayyuu Keenya Umrii Nuuf Dheeradhu
nuu jiraadha ammayyuu
December 2, 2015 at 05:09
nuu jiradha ammayyu
Baayyee Galatoomi Obbo Jawaar Muhammad
December 2, 2015 at 06:22
Xalayaan kun dafee akka bira gahu osoo ta’e yaanni obbo Lammaa Magarsaa namatti tola garuu osoo ummanni mormaa jiruu yoo ummanni hin fudhatin jechuun maf barbaachise? amma ilmaan keenya dhumanitti eegun isaanirra hin jiru furmaata hatattamaat barbaada dhimmi kun hafee jira jettani akka ummata beeksiftan kabajaan isn gaafanna galootama obbo Johar
December 2, 2015 at 06:48
Marii Hanga Ammaatti Geggeeffame Hundarrattuu Ummanni Oromoo Hin Fudhanne. Imaammata Magaalota Walitti Makuu Kana Kan Caffee Oromiyaa Osoo Hin Taane, Kan Federaalati.Kaayyoo Isaas Ifa. Finfinneefi Naannawa Ishee Walitti Makuuf. Hawaasaa Fi Bishaan Gurraacha Walitti Makuuf. Garuu Tvo Kan Darbaa Ture Shashamannee Fi Kuyyara.Magaalotni Kunniin Duruu Qaama Tokko Fakkeennas Ta’uu Hin Danda’an.
Hanga Dhimma Jallatarratti Labsiin Bahu,gaaffii Ummata Badhaarratti:
1. Afaan Oromoo Haala Federaala Ta’urratti
2.Finfinnerratti Olaantummaa Oromoo Cimsuurratti
3.Hirmaannaa Oromoo Magaalarratti Baay’isurratti Osoo Hojjatamee Dansaa Ture
Kun usoo akka jedha Angoo huganummaa
%100 qabaatani hammana hin jibbaman ture
Garuu muudamuu male danddeetti takkayuu
Hin qaban waan takka raawachuuf
Yoom eega mee gaafa ilmaan oromoo laffa dhumatte ????
AMMAS TAANAAN SHAKKIIN MALEE NO MORMINA !!!!!
December 2, 2015 at 07:51
hamasa era dedebine nujidhuu sinjenaa
Nuuf jiraaadhi tokkicha sabaa!! karaadhuma dandaa’ameen ABO cabsee seenee uummata isaa waliin akka injifatuuf carraaqaa!!
December 2, 2015 at 08:55
waliif birmaadha lammiin oromooo
Yaa Obbolessoo ati garuu galatoomi. Nama beekaa rafee dhukasnuu hindammaksuu jedhu mitirree abbootini keenya
namooti akka kanatti xalayaan kun barreeffameef kun maddi dhufaatii isaanii osoo dhiiga oromooti ta’ee garaan isaaniiyyuu ni beeka ture. Waan tokko itti himuun hin barbachisu ture. Yeroo akka kanatti dhiigi barataa dhangala’uu taa’e hin ilaalu ture. Amma garuu garuu osoo sababa dhiigi barataa kanaa maaliif dhangala’e jettee gaafattee atis deebiin kee rasaasa. Silas garaagarummaan keenya dhiigummaarratti ture. Isaan warri opdo aangoo gara olii jiran kun oromummaa tokkoyyuu hin qaban. Kan isaan jedhanis waliin jiraachuufi kaayyoo walii beekuudhaa jedhu. Miti garuu oromummaam dhiigaan malee.
Obbo Lammaa Magarsaa A/Y/C/O waadaa Uummata keenyaaf galtanii fi kutannoo fi ofitti amanamummaa keessaniif galatoomaa ammas dhuguma haalakanaan ummatakeenyaaf falmitu bu’aa ummata Oromoof dhaabbattu taanaan nus ijoollaan oromoo isin waliin jirra jabaadha.
leenci itti yaadet dubbaata ifirra laalet hubata maaf akkatti itti yaadu oolan me xiqolle isan hin salfachiisu waarra opdo kana isaan oromoo tamiif dhaabatan maatii isaanitu hogganu hin dandeenye maalif jeennan sodaa namatis lafa oromoo gurgursisa sabaa oromo fixaanii ficicsisaa nama isiaan dhaabatanif eenyu akka tahee hubaachun nama dhiibaa
Galgalo ganamo borii
Jariillee gorsaa dhagesuu jabadhaa nuuf gorsaa
December 2, 2015 at 17:16
galanni keessen hin badin. akkanatti gorsa laachuun qabsoodhaa.
Dhugumaatti Obbo Juwar Mohammad sabboonaa , gara kuteessa saba isaaf, lammii isaaf dhaabbatu dha. Ammallee rabbiin keenya nama saba keenyaaf falmu nuuf haa kaasu. Tokkicha hamma dhibbaa nuuf jiraadhu
Jawaar hedduu galatoomi. Ilmaan Oromoo kanneen Opdo hooggantan mee of ilaalaa! Har’a biyyaa fi lammii gurgurtanis bor gaaffii seenaa jalaa hin baatani.
December 2, 2015 at 19:56
Galatoomi Obboo Jawar Muhammad
~ Ni turra malee ni urra jette boombin!
Opdo sila isin eennuuf hojjattan garatti guuttannaan homaa isinitti hin mullatuu?
Kan garaa guuttataniinillee dhiiga ilmaan oromootiini mee daqiiqaa shaniif oromummaa keessan yaadadhaa mee
OBBO JAWAAR MOHAMAD ANI SIIN BOONA UMRII NAA DHEERADHU
December 3, 2015 at 03:18
Amma namni kun maal gochuu dandaya? Qawwee malee waan nubaasu hin jiru. Ethiopia dhuma tanarraa garaa kutachuu dadhabdani. Malee kan ummata keenya kan hundaaf gahe Wayaanee fi jala deemtuu isaaniti. Asumaa nuuf jiraadhaa jiraadhaa kadhaa itti fufaa – shame on you. Waan bareesitan dhabani fakkaata.
December 3, 2015 at 04:41
Kan deemu waliin deemuun,kan dubbatu waliin dubbachuunis,kan qabsa’uu waliiniis………………,Halli amma Oromiyaa kessa jiru kuni waan bay’ee nama yachisuudha jedheen yaada sababni isaas Obboo Lamman jechaa kana dubbachuu isaaf bu’aa maal buusee silaa yeroo baratonni mana hidhatti gurramaa jiraan maaf callisa egaa dhugumaan angoo qabatanii “yoo “hin barbannee jechuun mana hidhatti gurree siin fixnaa jechuudha moo ,Jowar atis waan sirra eggamu rawwachaa jirta itti fufi…..
Obboo Jawaar Yaada keessaniif guddaa galatoomaa!!!!!! nuuf jiraadha!!!! umrii nuuf dheeradhaa!!! oromoon kan akka keessanii dhimmii biyyaa quqquuqu qabachuu keenya nu boonsaa!!! ammas dhimmoota adda addaa irraattii hubannoo gama toora internet kananis yaa ta’u gama TV OMN nuuf hubannoo nuuf kenna keennaa isiiniin jechuun barbaada ijaa qalbiirra nuu hanbisa!!! garuu guddaa akkaa isii jaalannuu osoon hin ibsiin bira hin darbuu!!
Qabsoon itti haa fufuu
Lelo E. Tura
December 3, 2015 at 10:14
First we would like to thanks to Jawar Mahammed. This is the one what whole oromo people need and struggling for it
shewa Tadesse Dadi
Barreessitoonni yadoota armaan olii hundi keessan Galatoomaa!
Jaffee Rabbi sihaa Ebbisu.Kunoo akkasmalee.Adaraa Ummaata Isiin baataajiru Ilaalaa Caffeen.Rabbii waangaarii nuhaa dhagesisu.
Obbo lamma Magarsa yoo dhuguma oromof dhabbattan ilmaan oromo tif yaada seena xuaraha hin galmessina oromiyaan haala kanan hin haftu
Maqummaan jijjiruuf karoorfatan kun akkuma sirna Gitabittaa naafxanyadha eenyummaa oromootifi Oromummaa lafarraa dhabamsisuuf male wannii bira hin jiru
jamaal ilma alii
December 3, 2015 at 23:41
Your Commenthaalaan sigaalatoonffanna leenca oromoo
December 4, 2015 at 11:31
jabadha rabbin umri dhertu isinif ha khenu
December 5, 2015 at 14:16
Gallattomi kabajamo Kenya obbo jowar yannii ke yadda sirrii tahedha nuf jirradhu
Akkuma xalayarra barreffameti iccitiin labsii misooma lafa magaalaa caffeen baase magaalota oromiyaa wolitti makuu odoon taane, magaalaa finfinnee fi magaalaalee oromiyaa kan finfinnee marsanii jiran wolitti makuufi magaalota ollaa naannolee biraatiin wol daangessan wolitti makuu fakkaata. Kun gonkumaa ka seera caaffeen tumatee osoon taane seeraa qaamni biraa tumee gubbaa gad dirise fakkata.
A M(Bilisummaa M.)
December 25, 2015 at 10:58
Obbo Jawaar guddaa galatoomi nuuf jiraadhu waan siin jedhu hin qabu haadhooko ammas uggurraa OMN isheen gochaa jirtu kana dadhabne qomooko adaraa haakaanu namtokko tokko hindadhabu meeshaa qabaattes dhabdes oromo ka’i adaraa maaloo beekaan keenyas wallaalaan keenyas dhumee nujalaa maatti hafuuf deemaa jirra nuti dhiiro lammii nuuf du’aa jiru dhabnee?
Abbaan iyyatu malee gandi namaa birmatu jedha oromoon!!.kanatu lammii boqonnaa dhowwe.Waan kaleessa Gobanni godhe beekuu caala waan ofii gochaa jirruu beekuun filatamaadha.kanaaf beektota oromoo keessaafi ala jirtan maraaf galanni koo guddaadha.horaa bulaa ija diinaarraa haafaa!!.
May 11, 2017 at 19:23
Wow dhugumaan.obbo lammaan hojii gaarii gochaa jiru rabbi ija hamtuu jalaa isaan haa eegu obbo jowar mohamed nuuf jiraadhu.
Saba miidhameef hojedhaa darbaa malee daantaa dhuufaa keessaniif hin ta’iin seenaa keessatti waan gaariin faarfama.